yebo noma cha
Buza umbuzo bese uthole impendulo: yebo noma cha
Uvame kangakanani ukulinda impendulo yebo noma cha? Uvame ukubuza imibuzo kaningi? Cishe wonke umuntu ubuza imibuzo embalwa ngosuku futhi ufuna ukuthola izimpendulo kubo. Ngokuvamile, abantu baphoqeleka ukwenza izinqumo. Yebo noma Cha, lezi yizimpendulo eziyinhloko kumbuzo amaningi. Indlela yokuqonda ukuthi iyiphi impendulo: yebo noma cha, iyoba yileyo efanele? Uma ungabaza futhi ngeke ukwazi ukukhetha, sekuyisikhathi sokuvakashela isayithi lethu. Futhi thola ukuthi yimiphi impendulo ongayikhetha: yebo noma cha. Esakhiweni da-no.ru?lang=zu ungacela noma yimiphi imibuzo engaphendulwa yebo, cha. Ungayisebenzisa kanjani isayithi?
Vele ubhale umbuzo wakho bese uchofoza inkinobho ethi "Cela". Ngemuva kwemizuzwana embalwa, impendulo izoba yebo noma cha. Yiqiniso, izimpendulo zinikezwa ngokungahleliwe. Futhi awukwazi ukuthembela ngokuphelele le ndlela. Nokho! Inkonzo Yokuphendula YEBO CHA iyakunqoba ukunqotshwa futhi wenze isinqumo esifanele. Uma uthola impendulo CHA, kodwa ufuna ukuthola impendulo ye-YEB, khona-ke lokhu kuzokunika ukuzethemba. Uma ufuna ukuthola impendulo CHA, kodwa u-YEBU, khona-ke umbuzo wakho uzokuphoqa futhi ukucabanga izinto bese uthatha isinqumo esifanayo esiwusizo kuwe.
Kunoma yikuphi, insizakalo ye-YES / CHA iyamangaza futhi iyasiza ekwenzeni izinqumo. Nakuba izimpendulo zinikezwa ngokulandelana okungahleliwe ngokuphelele. Futhi bavame ukungalungi. Kodwa nguwe kuphela owenza ukukhetha. Isayithi "YEBO noma CHA" kusiza ukuqonda ukuthi yikuphi ukukhetha okumele ukwenze: yebo noma cha.